कुन महिनामा जन्मेको व्यक्तिको कस्तो स्वभाव?? – Asal Kura
गृहपृष्ठ कुन महिनामा जन्मेको व्यक्तिको कस्तो स्वभाव??
कुन महिनामा जन्मेको व्यक्तिको कस्तो स्वभाव??
जानिराखौँ रोचक जानकारी
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गर्छ। आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मङ्गलवार मङ्गलको हुन्छ भने बुधवार बुधको प्रभाव रहने गर्छ। बिहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ। शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ। यी ग्रहहरूले तपाईँको आयआर्जनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छन्। त्यसैगरि कुनै पनि मानिसको जन्म महिनाको प्रभाव समेत उसको जीवनमा पर्ने गर्छ।
पछिल्लाे - फेरि बन्यो टिकटक सर्वाधिक लोकप्रिय एप : १ महिनामा ६ करोड डाउनलोड
अघिल्लाे - नव वर्षमा पूर्वराजाको सन्देश : जनताका आशा चकनाचुर हुँदै गएको भन्दै यस्ता सुझाव